PSJTV | सकेको तिरौंला, नत्र फिरिमा!
सकेको तिरौंला, नत्र फिरिमा!
बुधबार, ०६ भदौ २०७५ बच्चु हिमांशु
देशमा यतिबेला करको आतङ्क बढेको छ। सरकारले हरेक कुरामा कर लगाउन थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणलाई पर्न थालेको छ। तरकारीदेखि गाडीसम्मका सबै चीजको भाउ आकाशिएको छ। यसो हुँदा बढी मार त मजदुरी गरेर खाने परिवारलाई पर्नेनै भयो। कमाइ उस्तै छ, खर्चभने चुलिंदै गइरहेको छ। न आफूले चाहेरनै व्यवस्था आफ्नो अनुकुल हुन्छ, न व्यवस्थाले आफैं जनताको कुरा बुझ्छ। अन्तत: समाजनै एककिसिमले गहिरो पीडा बोकेर बाँचिरहेको प्रतित हुन्छ।
सरिता र प्रमिलाको आआफ्नो परिवारपनि यस्तै व्यवस्थाले आक्रान्त छन्। दुई परिवार, तर व्यथा एकै। दुवैका श्रीमान् ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्छन्। महङ्गीले गर्दा श्रीमतीहरुले चाहिने सामान किन्न सकिरहेका छैनन्। ट्याक्सीवाला लोग्नेहरुले पहिलेजस्तो कमाइ हुनेगरेर यात्रु पाइरहेका छैनन्। व्यवस्थाले दिनहुँ झन् कस्सेर घाँटी अँठ्याइरहेको छ। महङ्गीविरुद्ध दिनहुँ हुनेगरेका कार्यक्रमहरु उनीहरुले देखिरहेकै छन्। तर त्यस्तो गतिविधिले उनीहरुको जीवनचर्यामा कुनै सरारात्मक परिवर्तन ल्याइदिनभने सकेको छैन। यसैबीच उनीहरुको जीवनमा अचानक एकदिन अनौठो घटना घट्छ। त्यही घटनाको कलात्मक मञ्चननै नाटक 'सकेको तिरौंला, नत्र फिरिमा' हो।
नाटक 'सकेको तिरौंला, नत्र फिरिमा' श्रावण १८ बाट सुरु भएर तेश्रो हप्तासम्मपनि भव्यताका साथ मण्डला थियटरमा मञ्चन भइरहेको छ। ईटालीयन नाटककार डारियो फोको नाटक 'कान्ट पे? वन्ट पे!' लाई विकाश जोशीले नेपाली समाजमा आधारित रहँदै अनुवाद गरेर यस नाटकको सफल निर्देशनपनि गरेका छन्। हाँस्यरसले भरिपूर्ण नाटकले समाजको यतिबेलाको माहोललाई बडो यथार्थपरक ढङ्गले चित्रण गरेको छ। यो नाटक समाजकै वास्तविक पात्रहरुजस्ता लाग्ने कलाकारहरुको उत्कृष्ट अभिनयसंयोजन हो। आकर्षक मञ्च र व्यवहारिक मञ्चसामग्रीहरु हुनु यो नाटकको अर्को उल्लेखनीय विशेषता हो। नाटकले केवल दर्शकलाई हँसाउनेमात्रै उद्देश्य बोकेको नभएर राज्यको अन्धो व्यवस्थामाथि रचनात्मक कटाक्षपनि यसले गरिरहेको छ। नाटकको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षनै यही हो। नोवेल पुरस्कारविजेता फोको नाटकलाई नेपाली शैलीमा अनुवाद गरेर त्यसलाई मञ्चमा उतार्ने जुन धृष्टता जोशीले गरेका छन्, यसमा उनी सतप्रतिशत सफलपनि भएका छन्।
नाट्यक्षेत्रका उत्कृष्ट पाँच कलाकारहरुको सशक्त अभिनय रहेको नाटक 'सकेको तिरौंला, नत्र फिरिमा'को मञ्चन भाद्र १० गतेसम्म मण्डलामा चलिनै रहनेछ। कलाकारहरु सरिता गिरी, अनुपम शर्मा, विजय बराल, प्रमिला खनाल र उमेश तामाङको रोचक अभिनयसंयोजन हेर्नलाई हामीसंग अझै चार दिनको समय छ। नाटक प्रत्येक साँझ ५:३० बजे र शनिबार दिउँसो १:३० बजे अतिरिक्त सो गरेर अब लगातार पाँच सो मञ्चन हुनेछ। यसका लागि अनामनगरस्थित मण्डला थियटरले हामीलाई व्यग्रताका साथ पर्खिरहेको छ।
नेपाली फिल्म उद्योगमा अश्लील भिडियो आतंक
नेपालको नयाँ नक्सालाई समर्थन गरेको भन्दै मनिषामाथि खनिए भारतीय मिडिया
दिवेश बने अमेरिकन आइडलको उपविजेता
बालिका निर्मला पन्तको कथाबस्तुमा बनेको चलचित्र ‘कोपिला’ टेलिभिजनबाटै रिलिज गर्ने तयारी
कोरोनाको प्रभाव : भारतीय फिल्ममा चुम्बन, बेडसिन र अंकमालको दृश्य नहुने
टेकु र पाटन अस्पताल बिरामीले भरिए, अरु अस्पतालले रुघाखोकीका बिरामी भर्ना लिन मानेनन्
अनुसन्धान गर्दा अब सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने
24th Apr 2020 पिएसजे न्युज
साउदी अरेबियामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई खानबस्न कुनै समस्या परेमा आफ्नो विवरण दूतावासमा टिपाउन रिहादस्थित नेपाली राजदूतावासले आग्रह गरेको छ। नेपाली दूतावासले सबै नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो यथार्थ समस्या दूतावासमा जानकारी गराउन आग्रह पनि ...
नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा सुकिरहेको छ, सडिरहेको छ । तर, भारतबाट निर्वाध आएको तरकारी सीधै भान्सामा पुगिरहेको छ। नेपाली किसानको उत्पादन उठाउन नमान्ने बिचौलिया व्यापारीले फोनकै भरमा भारतबाट तरकारी मगाएर ...
काठमाडौं : विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स चैतमा भारी मात्रामा घटेकोे छ। चालु वर्षका अघिल्ला ८ महिनामा मासिक औसत ७४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको नेपालमा चैतमा ३४ अर्ब ४८ करोड मात्रै भित्रिएको ...